Fanohanana ny fmmb - Mana isan andro
Satria izao no tenin’ny Soratra Masina: « Izay rehetra hiantso ny Tompo dia ho voavonjy ». Hataon’ny olona ahona ary no fiantso ny anaran’ny Tompo, raha tsy efa ninoany? Hataony ahoana no fino Azy, raha tsy efa reny? Hataony ahona no fandre, raha tsy misy mpitoriteny? Ary hatao ahoana no fitoriteny, raha tsy nisy nirahina? Araka ny voalazan’ny Soratra Masina hoe: « Endrey tsara izany mahita ireo mpitondra *Vaovao Mahafaly tonga hanambara ny soa! » Romana 10:13-15 (DIEM)
Ny fanohananao ny FMMB dia manampy ny fikambanana hizara ny filazantsara amin’ny olona rehetra manerana ny tany.
Izany dia fandraisanao anjara amin’ireo asa maro samihafa izay ataony, mba hitarika ny olona handray an’i Jesoa Kristy ho tompo sy mpamonjiny. Ary koa mba hampandroso ny olona ho amin’ny fiainana araka ny sitrapon’Andriamanitra, izay azo avy amin’ny alalan’ny teniny dia ny baiboly.
– Fikambanana iraisam-pirenena. Izay manodidina ny 130 eo ho eo no misy azy amin’izao fotoana izao.
– Fikambanana mampiray ny kristiana avy amin’ny antokom-pinoana samihafa.
– Hitory ny Filazantsara, – Hamokatra fitaovana hanampy ny olona amin’ny famakiana ny Baiboly ka ho tia izany,
– Hanome fanofanana sy fampianarana ny kristianina mba hitomboan’izy ireo amin’ny fahalalana ny Soratra Masina ka ho tonga mpanompon’i Jesosy Tompo mahatoky eo anivon’ny fiangonana sy ny fiaraha-monina.
Ankizy sy ny tanora sy ny isam-pianakaviana mandray an’i Jesoa ary manana fifandraisana velona amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Baiboly sy ny vavaka.
Hanao izay hahatonga ny olona ho tia sy hamaky ny Baiboly isan’andro, ka hihaona amin’i Jesoa Kristy manokana amin’ny alalan’izany, ary ho tonga vavolombelon’i Kristy ka handray andraikitra any amin’ny toerana misy azy avy.
Fitoriana ny filazantsara:
Seminera Lasy …
mana isan’andro, Isika samy isika …
Seminera – Lasy :
Fanofanana mpivady, Fanofanana tanora, Fanofanana ny mpanofana …
Ireo sampana tsirairay avy dia samy manana ny asa sosialy hataony koa, izany hoe mahakasika ny maha-olona manontolo ny asa atao fa tsy ny fanahin’ny olona ihany. Ohatra: Ny fanampiana ireo tra-boina hanehoana ny fitiavan’i Kristy amin’izy ireo. Menaka, savony, siramamy, lamba firakotra…
Ny taratasy (formulaire) izay fenoinao dia tsy ampiasainay amin’ny zavatra hafa mihitsy, fa ho an’ny fanohanana ihany.
Fandoavana avy amin’ny carte bancaire:
Ny site paypal no hanaovanao ny « transactions » rehetra fa tsy eto aminay, ary tsy voatery misoratra anarana fa tonga dia mandoa amin’ny carte. Site « sécurisé » tsara ary « crypté »izy io, izany hoe tsy misy mahita ny « numéro carte bancaire » anao ary azo antoka fa tsy hisy hangalatra.
Fandoavana avy amin’ny western union:
Rehefa tsindrinao ny western union dia hitanao ao ny anaran’ny handefasana azy sy ny adiresy. Alefanao any amin’ny western union ny vola dia fenonao ny formulaire avy eo mba hahafahanay mandray azy.
Fandoavana avy amin’ny virement bancaire:
Rehefa tsindrinao ny virement bancaire dia hitanao eo ny « numéro de compte » hafahanao manao virement na avy any madagasikara, na avy any ampitan-dranomasina « virement international ».
Fandoavana avy amin’ny orange money:
Rehefa tsindrinao ny orange money dia hitanao ao ny anaran’ny handefasana azy sy ny adiresy. Alefanao any amin’ny tranokala « orange money » ny vola dia fenonao ny formulaire avy eo mba hahafahanay mandray azy.
Mila fenonao foana ny (formulaire) hahafahanay mandefa rosia aminao.
Fiarovana ny tranokala:
Ny fandoavam-bola rehetra dia ivelan’ny mana-isanandro.fr avokoa: Paypal, western union, Orange money. Ireo dia orinasa izay hitanay fa tena mandray andraikitra sy manao ny fomba rehetra mba hiarovana ny mpandefa ny vola amin’ny halatra na koa hoe « piratage ». Manasa anao hijery ireo « condition générale de vente » amin’ny tranokalan’izy ireo.
Raha misy fanontaniana dia afaka hanoratanao izahay.
Ahona ny fomba andefasana ny vola ?